Sein Lyan - စိ န် လျှံ: ဖိုးစိန်ငကြွား
Writer Sein Lyan Time 2:00 am
ဟားဟားဟား ... တော်တော်ရယ်ရတယ် ...ခုရောဘယ်လိုလဲ အကို ... ငယ်ကအကျင့် ကြီးအထိလား .... ဒါနဲ့ စကားမစပ်.. တစ်နော်...
တစ်က ရချင်လို့ရတာဟုတ်ဖူး... အကိုအမများ အကုန်အိပ်နေသော အချိန်မို့လို့ ... ဟေးဟေး.. ပျော်တော့ပျော်သား..တစ်ကွ
20 July 2009 at 03:06
အခု ရုံးမှာ ဘော့စ်ဝင်လာမဲ့တံခါးပေါက်ကို ကြည့်လိုက် ရယ်လိုက်လုပ်နေရတယ်..မနက်စောစောစီးစီး ရယ်အောင် ရေးထားတာလေး ဖတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ဘကြီးတော် ငကြွားကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. သူပြောမှပဲ မွန်ပြည်နယ်သားတွေ.....
လုပ်ရက်ပါပေ့။နောက်မှာသူဌေးကတော် ရှိတာမေ့ပြီး အကျယ်ကြီး ရယ်မိပြီ။လျှော်ပေးတော့။ သူဌေးကတော်က ဘာဖြစ်တာလဲတဲ့။ ရူးသွားပြီးထင်နေမှာ။တစ်ယောက်ထဲရယ်လို့။
ဒါနဲ့စကားမစပ် ကိုကြွား အဲလေ ကိုကြီးစိန် ခုရော ရွှေတွေ ပါလာသေးလား။ ပါလာရင် နည်းနည်းလောက် မျှပါလို့။ ဟိဟိ
သကြားလုံးနဲ့ ချဉ်ဖတ်ဆို..လက်လုပ်ချဉ်ကို ပိုကြိုက်သရှင့်..
အော် ပါရမီ ထူးပါပေ့
မျောက်မျောက်ရယ် ကြွားချက်... :P
ခုလက်ရှိ အကြွားချင်ဆုံး တစ်ခု ထပ်ကြွားပြပါ။
ကြွား ချက်က​တော့ ကွယ်.....
ဒီနှစ် ​မွေး​နေ့ ​ရော..
:) very funny,,, very good :D
မော်လမြို်င် ကို လိုက်လည်မှ ပုန်းမနေနဲ့ နော်..း))
20 July 2009 at 04:54
်အမြဲလာဖတ်ဖြစ်ပေမယ့် မမန့် ဖြစ်ဘူး ဒီတခါဖတ်ရင်း မေ့ပြီး အသံထွက်ရီလိုက်လို့မန်နေဂျာကြီးက What happened? တဲ့ ဟင့် အဲဒါ ကိုဖိုးစိန်ကြောင့်
ဖတ်ပြီးတော့ရယ်လိုက်ရတာ...ပျော်စရာတွေ ဖန်တီးပေးတတ်တဲ့ ငါ့အကိုလဲ ပျော်ရွှင်ပါစေ...း-)
စိန်ကြွား ကြွားစိန် အမရဲ့ သံဖြူဇရပ် သားကတော့ မကြွားတတ်ဘူးတော့
စာလဲ မရေးဘူး.. မအားဘူး မအားဘူး နဲ့ အသစ်လဲ မထွက်ဘူး.. မီးအိမ်ပြင်နေတာလား? ဟွန်း
20 July 2009 at 10:04
ကြွားတဲ့အထဲမှာ ငါးရောင်းတဲ့ မိန်းမကြီးကို ကြွားတဲ့
တက္ကစီနဲ့ 'မ' ဘို့ ပါဂွင်ဆင်လိုက်သေးတယ်..ဟဲဟဲ
နာမည် ပြောင်းမယ် နာမည်ပြောင်းခေါ်တော့မယ် အရင်က ကိုထောင်လို့ခေါ် တော့ အခု ကြွားထောင်လို့ခေါ်မယ် ထောင်ကြွားဆိုရင်ရော ကောင်းပါမလား အဲမကောင်းသေးဘူး ကြွားကြွားထောင်ဆိုရင်ရော .အဲ.ထောင်ထောင်ကြွားဆိုရင်ရော ဒါလဲကောင်း ဘူး အဲဒီ ထောင်နဲ့ ကြွားနဲ့ဆက်စပ်လို့ကိုမရဘူး တော်ပြီအရင်လိုထောင်ထောင်ပဲကောင်းတယ် နော် ထောင်ထောင်
ကြွားတတ်တာကိုပဲ မရှက်မကြောက်ပြန်ကြွားနေသေးတယ် ..
ငကြွားလေး ....... ဒီနှစ်မွေ့နေ့ သာကူပြုတ်တောင် စားရမယ့်ပုံမပေါ်ဘူး။
တခါကြွား တခါ ရီရတယ်။တော်သေးရဲ့ အိမ်မှာမို့ အသံထွက် ရယ်နိုင်တာ။
အကြွားသန်ပီး ပိုက်ဆံအိတ် ကြီး ထုတ်ထုတ် မပြနဲ့။ ရိုက် လု ခံနေရမယ်။
ငကြွားလေး ဒီနှစ် ဘာကျွေးမှာလဲဟ ငါနဲ့ မွေးလ တူနေတယ်။ :P
ဒါပေမယ့် ကြွားစရာ တစ်ခုလိုနေသေးတယ်...
အိုး... ဖတ်ပြီးရီလိုက်ရတာ... လူပါမြင်ဘူးချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ်... :D
ကိုလူထွေးလဲ ဖိုးစိန်လို အကျင့်ရှိလို့လေ... ဗေဒင်ဟောလို့ ရသမျှတွေကို ထုတ်ပြတာ တွေ့တယ် မဟုတ်လား...
ဖိုးစိတ်ကတော့ အများကြီး သာတာပေါ့.... ငါးစိမ်းသည် အဒေါ်ကြီးကတောင် ဆရာတင်ရတယ် ဆိုတော့ ဆလံတိုက်ပါတယ်...
၀ါးးးးးးးးး ကိုဖိုးစိန်တို့ ကြွားချက်က
ဒီနေ့ မွေးနေ့မှာ သာကူကျွေးပြီး ကြွားမယ်ထင်တယ်။ :)) ရွှေတွေကို အပေါင်ဆိုင်ပို့မဲ့အစား ခဏငှားပါလား။ အလှူမှာ ကြွားချင် အဲ ၀တ်ချင်လို့။
Happy birthday နော်
ရေးတတ်လိုက်တာ။ ဖတ်လို့လဲ ကောင်းတယ်။ ရယ်လဲ ရယ်ရတယ်။ :)
ကြွားတာကိုတောင် ကမ္ဘာနဲ့ချီသိအောင် ဘလောဂ်မှာ
ရေးနိုင်တဲ့ ဖိုးစိန်ကို အကြွားဘွဲ့ပေးမယ်
ကိုကြွားစိန်ဆီလာလည်တာ တော်တော်ရယ်ရတယ်။ ပျော်ဖို့လဲ ကောင်းတယ်။ ငယ်ကအကျင့်တွေ ပျောက်ပလားအကိုကြွား။။ အဲ အကိုစိန်။။။။ ဟဲဟဲ
မွေးနေ့မှာ တစ်ခုထဲပြောချင်တရ် ။ ဒီနေ့ကစပြီး ပျော်ရွှင်မှုတွေပဲပြည့်စုံပါစေ ။ ခံစားနားလည်ပေးပါ ။
မနိုင် မနိုင် သယ်ရင်းတို့များ လုံးဝမနိုင်ပါကွာ။